Modelsdị ọhụrụ nke Michael Kors smartwatches dị ugbu a na ahịa | Akụkọ akụrụngwa
Ruo afọ ole na ole ugbu a, ndị ọrụ nche hụrụ ka ahịa ha na-adalata nke nta nke nta, na-akwado elele anya dị egwu na ọnụọgụ ọnụọgụ. Movementzọ a emeela ka ọtụtụ n’ime ha họrọ imikpu onwe ha kpamkpam na mpaghara a site na ime mgbanwe maka omume ahịa, nke mere na ahịa nche, ma ọ bụ na ọ bụghị, ga-agafere n’aka ha ọzọ, ọ bụghị dịka afọ ole na ole gara aga. ma ọ dịkarịa ala ha ga-eweghachite akụkụ nke ahịa furu efu. Koolọ ọrụ ahụ bụ Michael Koors, nke anyị kwupụtara na ọ na-arụ ọrụ na smartwatches ọhụrụ, ka debere ụdị Sofie na Grayson, ụdị nwere ọnụ ahịa karịrị ọnụego kwesịrị ekwesị ma dabara adaba maka ndị niile na-ege ntị, nke malitere na 369 euro.
Luxurylọ ọrụ okomoko emeela ka ọ banye na ngalaba a, ịmalite Sofie maka ụmụ nwanyị na Grayson maka ụmụ nwoke. Gradị Grayson na-enye anyị ihuenyo okirikiri nke 1,39 nke nwere mkpebi nke 454 × 454 tinyere batrị 370 mAh. Maka akụkụ ya, ụdị Sofie, nke akara ahụ chọrọ iru ụmụ nwanyị na-ege ntị, anyị na-ahụ ngwaọrụ nwere ihuenyo 1,19-inch na mkpebi 390 × 390. N ’ụzọ dị obere ka batrị na - emetụta batrị 300 mAh.
Iji jikwaa ụdị ndị a, Michael Kors ahọrọla maka Snapdragon Wear 2100, nke na-ejikwa 512 MB nke Ram gam akporo War wee nye anyị 4 GB nchekwa n'ime. Modelsdị abụọ a na-ejikwa nke abụọ nke gam akporo Wear. Iji gbanwee ọnụahịa dị ka o kwere mee, onye nrụpụta anaghị enye anyị mgbawa NFC iji nwee ike ịzụrụ ihe na-enweghị kaadị akwụmụgwọ anyị. Ọ naghị agụnye ihe mmetụta GPS ma ọ bụ ihe mmetụta ụda obi. Ga - ahụ na ụlọ ọrụ ahụ ebidola ihe nlere a iji yikwasị ya, ọ bụghị iji ya maka egwuregwu.
Banyere agba, o doro anya na Michael Kors maara ihe ọ na-eme ebe ọ na-enye anyị ụdị ndị a na agba dị iche iche nke igbe ahụ wee mechie na eriri: ọlaọcha, bilie ọlaedo, ọla edo, oji, piom, bilie ọla edo na acetate, bilie ọla edo inlay, sable, navy, inlay ọla edo na ọla edo na acetate. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhazi eriri ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-enye anyị nhọrọ nhọrọ nhazi dị iche iche, ọ bụ ezie na ọnụọgụ nke eriri dị adịghị dị ka nke Apple Watch na-enye ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Michaeldị Michael Kors smartwatch ọhụrụ ahụ dị ugbu a n'ahịa
Wiko Lenny 4, ekwentị na-aga nke ọma maka euro 120